Fanontana 3D - Ikkaro
Ny revolisiona lehibe ara-teknika sy ara-toekarena amin'ity taonjato faha-3 ity dia mampanantena ny XNUMXD Pirinty, teknika famokarana izay, na dia tsy vaovao aza, dia nanjary nalaza ary nampanantena ny hahatratra ny trano rehetra.
Alaivo an-tsaina hoe hanao ahoana ny fananana ny fananana ireo ampahany sy zavatra ilainao eo noho eo. Ny ho avy dia ny tsirairay avy dia manana mpanonta 3D ao an-trano ary ny interface dia tsotra loatra ka azon'ny rehetra ampiasaina, toy ny hoe solosaina na fitaovana hafa ao an-trano. Handeha amin'ny fivarotana enta-mavesatra ve ianao raha afaka manonta izay ilainao ao an-trano? Eto no andehanantsika.
Amin'izao fotoana izao dia nofinofin'ny mpanamboatra, ny hackers ary ny mpitia DIY ...
Avy any Ikkaro dia miditra amin'ity tontolo mahavariana amin'ny fanontana 3d ity izahay mba hampianarana anao ny lafin-javatra rehetra, manomboka amin'ny famolavolana ny ampahany ka hatramin'ny fividianana sy fanangonana ireo fitaovana tsy miankina misokatra na mpanonta pirinty maimaimpoana.
Toy ny mahazatra dia te-hanolotra ny vaovao amin'ny fomba azo tsipiriany indrindra izahay, amin'ny alàlan'ny torolàlana sy torolàlana miandalana ary amin'ny fomba azo ampiharina indrindra.
Inona no jerena hividianana mpanonta 3D
Raha io no fifandraisana voalohany azonao ny tontolon'ny mpanonta sy ny mpanonta 3D Na satria mila mampiasa iray ianao na satria te hividy azy io ary tsy tena fantatrao hoe inona no tokony hotadiavinao dia avelako ho anao ireo fotony sy ireo toetra mampiavaka anao tsy maintsy raisina mba hampitahanao azy ireo ary fantaro izay mpanonta printy mahaliana anao.
Ny zava-misy ankehitriny Ny mpanonta 3D dia mbola tsy an'ny mpampiasa farany, izany hoe ho an'ny besinimaro. Tsy toy ny fitaovana hafa na gadget hafa izy io, fa amin'ny fahalalana kely na fahalianana azonao ampiasaina izany. Eto ianao dia mila fahalalana kely na farafaharatsiny misy ahiahy hahafahana mahazo tsara indrindra amin'ny fitaovana.